युनियन लाइफद्वारा ९ महिनामा ६ अर्बभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन - Aarthiknews
काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा रू. ६ अर्ब २२ करोड ५८ लाखभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीले १८ दशमलव ७८ प्रतिशत बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ अर्ब २४ करोड १६ लाखभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कुल दाबी भुक्तानी भने यस वर्ष शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत बढी रू. १ करोड २८ लाख भएको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १५ करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम रू. १ अर्ब ९ करोड २७ लाख रहेको कम्पनीको जीवन बीमा कोष रकम रू. १० अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. २ करोड ७२ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीले ६६ दशमलव ९४ प्रतिशत कम खुद नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी ३० दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ भने खर्च १३२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कम्पनीले यस वर्ष रू. २० करोड ९९ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको हो भने रू. १८ करोड २७ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हो । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ६९ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५६ दशमलव ४७ रहेको छ ।